Kachasị mma uwe mwụda akwa ịkpakọba igwe na -emepụta na ụlọ nrụpụta | UBL
Nchedo uwe Ịwa akwa mpako mpịachi igwe
Uwe dị mma: uwe nchebe, uwe na-enweghị uzuzu, uwe na-arụ ọrụ (ogologo kwesịrị ịdị n'ime oke nke igwe) yana akwa yiri ya.
Akpa plastik dị mma: PP, PE, OPP envelopu akpa rọba.
Companylọ ọrụ anyị na -abụbu ọkachamara n'ịrụpụta igwe mpịachi uwe, wee resị ya narị narị ndị ahịa nọ na mba ofesi, agbanyeghị, n'ihi ọrịa na -efe efe, gọọmentị China malitere ịchọ ka anyị mepụta igwe nkpuchi na February 2019. Ya mere, n'afọ gara aga, agbanweela nnukwu azụmaahịa anyị ka ọ bụrụ igwe nkpuchi, mana maka igwe mpịachi uwe, ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara.
. Usoro akụrụngwa a nwere ụdị nke FC-N332A bụ nke enwere ike iji na-apịaji uwe aka ekpe na nri ozugbo, na-apịa ogologo ogologo otu ma ọ bụ ugboro abụọ, na-enye akpa rọba akpaka na akpaaka.
Emebere igwe anyị na ngalaba, nke enwere ike ịkwakọba ya n'otu n'otu na ngalaba, na -echekwa ụgwọ njem. Enwere ike ibupu ya na ikuku.
② Enwere ike imeghe ọnụ ụzọ na -amị amị site n'ịga n'aka ekpe na aka nri. Ọnụ ụzọ ahụ dị mfe ma dịkwa mma, ihe owuwu ahụ kwụsiri ike, na -adịgide adịgide ma dịkwa mfe, ọtụtụ ndị ahịa na -ahọrọ.
System Sistemụ njikwa anyị nwere omume enyi, ọ nwere ike chekwaa teknuzu nke ụdị uwe dị iche iche na ihuenyo mmetụ, wee gbanwee ngwaahịa naanị mkpa ịhọrọ na ihuenyo mmetụ karịa 99 datas.
Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịtọ ọrịa nke ihe ọ bụla n'ibu na ihuenyo mmetụ. Ndozi a dị ezigbo mma.
Uwe ndị nọọsụ, uwe mwụda ọrụ, uzuzu uzuzu - uwe na -egosi, uwe nchebe, uwe electrostatic, wdg.
Ịwa akwa mgbokwasị ịkpakọba, akpa akpa, igwe mkpuchi akara ịkpụ ọkụ
Ụdị FC-N332A, enwere ike ịhazi agba igwe
Ụdị uwe Uwe mwepu, akwa ịwa ahụ nwere ike ịwepụ, akwa ịwa ahụ, uwe nchebe
Ọsọ Ihe dịka 300 ~ 400 iberibe / elekere
Obosara akwa Tupu mpịachi: banyere 700-750mm
Mgbe mpịachi: 200 ~ 300mm
Ogologo uwe Tupu mpịachi 1200 ~ 1300mm
Mgbe mpịachi: 300 ~ 400mm
Ogo igwe na ibu ya 8200mm*W960mm*H1500mm; 500Kg
Tinye aka na aka-> mpịachi akpaka-> akpa akpa-> kpo oku akpaka na ibelata.
Usoro ọrụ: A na -atụgharị efere abụọ ahụ iji mepụta oghere. A na -ebu ụzọ kpuchie akwa ahụ, wee pịa ya. Gbochie uwe ahụ ka ọ na -amị amị ma ọ bụ na -alaghachi azụ, dabara adaba maka akwa ịwa ahụ nke ihe dị iche iche.
Jiri ihe almọnd alloy sandblasting iji gbochie ịbịaru waya wee zere ịcha akwa ịwa ahụ.
Ọnọdụ ọrụ: Ihe mmemme a nwere ike ịtọ anya ihu mpịachi ihu na azụ, yana ugboro ole nke mpịachi.
Uwe ịwa ahụ na -adị ogologo, a na -apịgharị ya azụ ugboro abụọ.
Mgbe mpịakọta nke mbụ, ọ na -agagharị na -akpaghị aka, wee na -aga n'ogige atụrụ nke abụọ.
Ngwa izipu na ịkpakọba nke mbụ tupu akpa akpa nwere ike wepụta gas na mbụ wee mee ka akpa uwe ahụ dị larịị.
A na -eji etiti profaịlụ aluminom na -akwado cylinder, nke siri ike ma na -adịgide.
Nke gara aga: Igwe nhicha akpaka na igwe mbukota
Osote: Oké na mkpa uwe mpịachi igwe mbukota
Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama biya, Onye na -enyocha karama mmanya, Igwe nyocha akara, Onye na -enyocha karama,